Okraina : Mibilaogy hamantarana ny momba ny tena · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Mey 2011 8:34 GMT
Ho an'ireo mpidoroka zava-mahadomelina, mitondra fiovana azo tsapain-tanana eo amin'ny fiainany ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fanoloana [izay iankinana]. Ny fiverenana amin'ny fiainana mahazatra taorian'ny fahazarana mampiasa tsindrona zava-mahadomelina teo amin'ny fiainana, dia mitaky fiovana tsy eo anivon'ny fomba fiaina ihany fa fiovana koa eo anivon'ny toe-tsaina. Tokony hihevitra indray ny momba ny fiainany, ny toerana misy azy eo amin'ny fiaraha-monina, ny fifandraisany amin'ny hafa ny marary. Ho an'ny hafa kosa, iray amin'ireo fitaovana manampy amin'ny fandinihan-tena sy ny fizarana ny tahotra mbamin'ny ny ahiahy amin'ireo olona izay mitovy tranga amin'ny tena ny fanaovana bilaogy.
Mitantara betsaka ny traikefa mampiotam-po nananany mikasika ny fandraisany anjara tamin'ny tetikasa momba ny fampihenana ny loza ara-pahasalamana ireo bilaogera niankin-doha tamin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny Fikambanan'ireo mpiaro ny fitsaboam-pisoloana ao Okraina. Ity ohatra iray tamin'ny lahatsoratra an'i CHE ZET mipetraka ao Tchernihiv:
Tamin'ny volana martsa tamin'ny taona lasa , nanaraka fotoam-piofanana tao Dniepropetrovsk aho, ny lohahevitra dia “Ahoana no ahafantarana ny mpitarika sy hananganana ekipa mahomby”. Mahatsiaro tena ho voakasiky ny teny nataon'ilay mpampiofana anay Sergey Makoveyev tao Donetsk aho. Tsy tadidiko tsara ny teny izay tena nolazainy, fa raha lazaina fohifohy dia toa toy izao no nambarany: “Nahafinaritra ahy ny nihaona tamin'ny olona nanaraka fitsaboana teo, fa tsy ilay zaridainan'anana”.
Mahafinaritra hatrany rehefa mahare zavatra tsara momba anao, saingy nanomboka nandinika aho tamin'izay nolazainy, toy ny efa nandrenesako zavatra mitovy mikasika antsika. Zavatra toy ny hoe…hatramin'ny nandraisantsika anjara ity fitsaboana ity, adino avokoa ny tombontsoa tamin'izany fiainana izany, niondrika mangina ary nanomboka nihevitra ho toy ny ahi-dratsy eny an-jaridaina, mankaleo, manjonitra ary tsy misy ilàna azy. Eny tokoa, indraindray aho mahatsiaro fa nifoha saingy nilaozan'ny fiainana kanefa toa ilaozako mijanona eo amin'ny lalan'ny mpandeha tongotra toy ny olom-bery. Mampiseho ny zavabitany sy ny fahombiazany ireo namana tsy miankina amin'ny zava-mahadomelina, ary ianao .. amin'ny toe-javatra tsara indrindra, liana mihaino toy ny mpakafy fanatanjahantena diviziona ambany; tsy dia manan-javatra aseho …tsy manana fitokisan-tena ary rera-panahy lava. Tahaka ny hoe ny zavatra tokana azonao atao dia ny mitsahatra… Saingy avy eo hitanao fa azonao atao ny miala amin'ny zava-mahadomelina , ary midika zavatra izany, midika izany fa misy olona tia anao ao ambony ao ka tsy hoe tsy misy dikany ny fiainanao! Fahotana araka izany ny manimba tena na lasa mpisotro toaka na miverina indray midoroka zava-mahadomelina indray foka rongony ary tsy mampiasa ny vintanao. Araka izany dia tokony hiasa ho an'ny tenantsika isika, ovaina ireo fahazaran-dratsy nandritra ny taona maro ary esorina ao amin'ny rakibolana ny fomba fiteny hoe “tsy haiko ny” sy ny hoe “tsy vitako izany”. Tsy mora ny mandresy ny fahakamoana na ny tsy fihetsehana kanefa tsy nisy olona nampanantena fa zavatra mora atao izany.
Esenin nilazalaza ny fihetsehampony manoloana ny lahatsoratra izay midera vehivavy iray nahomby tanteraka tamin'ny fialana amin'ny zava-mahadomelina tsy nisy fanampian'ny tetikasa ho fampihenana ny loza ara-pahasalamana. Nanamarika izy hoe:
Toy izao no voavakiko tamin'ny gazety Rosiana ‘Natao ho an'ny malemy ny méthanol kanefa nahavita nandresy izany aho!’.
Voalohany nanohina ahy izany. Fa raha tafiditra ao anatin'ny tetikasa isika, dia tsy mahavita azy, osa ary tsy misy ilàna azy. Voalohany indrindra, nikasa hamoaka fanehoan-kevitra aho hilaza fa tsy marina izany. Jereo ny tenanareo! Tsy afaka hanjavona tampoka ny aretina …
Kanefa …nanomboka nieritreritra tsara aho. Angamba mety misy antony izany ? Angamba mety mialona ilay vehivavy aho? Nahavita izy. Nieritreritra izy fa manana hery ary raha velarina dia natoky tena.
Fa zavatra iray no fantatro, mahery koa aho. Tokony ho toy izany ny fandehan-javatra. Ekena, tsy afaka hamaly ny fanontaniana rehetra aho anio, ankehitriny, matahotra aho raha ny tenako irery tsy miaraka amin'ilay tetikasa ka mihevitra ahy ho tsy mahavita azy ny sasany! Kanefa na dia izany aza, afapo amin'ny anjarako aho… fa mbola velona ka tsy mila na iza na iza hikarakara ahy isan'andro. Afaka mandinika ary miasa irery aho […]Mihozongozona ny tohatra mankany amin'ny fiainana tsotra! Mankasitra ny tetikasa izahay ary hiezaka mandrakariva hanazava sy handresy lahatra ny vahoaka manodidina anay– mba fantaro izany azafady, izany ny fiainanay ! Aza kitikitihina !